Kutheni ndifuna ukuhlalisa umzimba? Esi sixhobo esihle kakhulu sokuphucula impilo yesikhumba, kwakunye nesisombululo esihle sokubonakala kombuso ngobuso bakho. Ukuzihlaziya kuyishukumisayo kwi-metabolism yangaphakathi, kwaye kunceda ukucoca isikhumba sombuso. Ukuba ucinga ukuba izihlathi zakho zizele ngokupheleleyo, ngoko unokukwazi ukujamelana nale ngxaki ngoncedo lokusila. Namhlanje siza kuthetha malunga nendlela yokwenza ubuso kunye nentamo yokuxilisa, ekhaya.
Ukusikwa kwe-facial akuyona inkqubo elula kwaye kufuneka yenziwe ngokuqapha, ukuba akukho zakhono, ngoko ubuso bakho bube ngcono ukunikezelwa kwizengcali. Nayiphi na i-massage ifaneleka ukwenza, kuphela emva kwengxoxo nodokotela. Kukho izithintelo ezithile zokwenza i-massage, kufuneka kukhunjulwe. Ukuba iinkqubo zokuvuvukala zenzeka kwesikhumba, ezifana ne-herpes, i-warts flat okanye ukukhula okwandisiweyo kweenwele zobuso, akuvunyelwe ukuhlalisa phantsi kwezi meko.
Ngaphambi kwenkqubo, kufuneka ulungiselele - ususe iinwele ngaphantsi kwebhanki, hlamba izandla uze uhlale ukhululekile phambi kwesibuko. Ukuba unesikhumba esomileyo, ngaphambi kokuba uhlaziyeke, ukhilimu onomsoco uyasetyenziswa kuwo, kwaye ukuba ulusu ebusweni luyingozi, ngoko kufuneka lucocwe ngodlo. Emva kokuba usususe isikhumba, sebenzisa ukhilimu omncinci onomsoco kwaye ungaqalisa inkqubo.
Xa uhlalisa ubuso bakho, kufuneka ulandele imithetho ethile. Ulusu lobuso lububele kwaye luselula ngokukhawuleza, ngoko ukucofa kufuneka kube lula, ngaphandle kwengcinezelo eqinile, kunye nemigqa yeminwe (yesibini, yesithathu, yesine). Ukuzihlaziya kwenziwa ngokusesikweni phakathi kwebunzi emathempelini. Emva koko ukusuka kumaphiko empumlo ukuya eetempileni, ukusuka emacaleni omlomo ukuya emkhatsini we-auricles. Kwaye ekugqibeleni ukusuka phakathi kwe-chin to the lobes yeendlebe. Isiqalo sokusilalisa kulula ukuphawula kwezi zikhokelo. Ekupheleni kwenkqubo, i-pat light elineendlela ezifanayo. Unemibhobho eninzi ebunzini lakho - ukutshintsha kunye nokutshatyalaliswa kwexesha elide kunye nokuqhaqhaqhaza kuyakuyicombulula le ngxaki. Ngesandla esipheleleyo, i-massage ishukumisa kakhulu. Emva kwenkqubo, kufuneka ubenze ubuso bakho bunamanzi ngophawu lwephepha, ususe ikhefu esele. Ngaphambi kokuba uphume kwitalato emva kwenkqubo, fowuni ubuso kunye nokuseta.
Ukuze kubekho umphumo omuhle, kufuneka wenze ukusikwa kwe-facial, le yinkqubo yeshumi. Ikhosi yokuzihlaziya iqhutyelwa imihla ngemihla okanye yonke imihla. Ekupheleni kwekhosi, unokubamba ukuxhaswa nge-massage kanye ngeveki.
Enye yeentlobo zokuphunga izicathulo zincithakalo . Yenza olu hlobo lokusila kunye neengxaki zesikhumba seoli, intsimbi, ukutshabalalisa, kunye nokuncipha kwetoni yezihlunu zobuso. Ngomsizi onjalo, ukujikeleza kwegazi kwanda, ukondla kwesikhumba kuphucula, ukuhlanjululwa kwesikhumba kuya kusebenza kwaye i-tonic tone iphakama. Le nkqubo ingenziwa kuphela nge-beauty beautician. Kodwa thina ngokwenu sinokunceda isikhumba esinjalo. Ekhaya, unokusebenzisa nje ugcino oluncinci lwe-krimu, kwaye ululaza ubuso bakho ngeminwe yeminwe ngokungabi ngaphezu kwemizuzu engama-2 -3, ugcina imiyalelo esuka ekhaleni. Ngaloo ndlela, siphumelele ukunyuka kokuphuma kwegazi kwesikhumba ebusweni.
Unobungozi ebunzini lakho, akusiyo ingxaki. Indlela elula kwaye efikelelekayo yokusila ngokulula izakukunceda. Yilula nje imihla ngemihla, uhlambulule ibunzi lakho kunye necucumber entsha, kwicala ukusuka ngakwesobunxele kuya kwesokunene, gubungela ijusi kwisisetyhula. Kwaye ngoko ufumana, njengoko bethetha, ezimbini kwi-one - massage kunye ne-vitamin moisturizing face mask. Imizuzu engamashumi amabini emva kwenkqubo, kufuneka uhlambe ubuso bakho ngamanzi apholileyo.
Ukuzihlalisa umzimba kungapheli ngaphezu kwemizuzu emithathu ukuya kwemihlanu. Kukho umgaqo - kungcono imizuzu emithathu, kodwa imihla ngemihla, ngaphezu kwesigamu seyure kanye ngeveki.
Ngoko ke, yintoni okufuneka uyazi ukuba unquma ukuzihlaziya ubuso.
Okokuqala: iingcaphephe zincoma ukusikwa kwe-facial skin ngaphambili kunokuba uya kuba neminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubudala.
Okwesibini: ukuba unomkhuhlane ophezulu, kukho ukuvuvukala kwesikhumba, ubuninzi be-moles ebusweni bakho, kunye nokushisa kwelanga okanye ukwanda kweenwele zobuso, kwaye ukucoca umzimba akunakwenziwa.
Okwesithathu: ulusu lobuso phambi kokuba i-massage ihlambuluke kakuhle.
Okwesine: ukunyakaza ngexesha lokuzihlaziya kunobumnene ngaphandle kwengcinezelo enamandla elukhumbeni, okukhokelela ekubonakala kwimibala emitsha.
Ubuso, emva koko, baninzi banakekelwa rhoqo, kodwa emva kwentamo nokugqithisa, ngenxa yezizathu ezithile bayalibala. Ukuqwalaselwa kwesikhumba sentamo kufuneka kunikwe ingqwalasela efanele, kuba imeko yayo inika nje ixesha lakho. Ukunyamekela intamo kunye nommandla wokugqithisa kufuneka ube rhoqo, ngakumbi kunzima. Yaye xa ithe yaba ngumkhwa, uya kufumana ukuzonwabisa kwangempela kuyo. Ekubeni ingqalelo kunye nokunakekelwa ngumntu othandekayo kunika umuzwa wokwaneliseka ngokupheleleyo. Ukongezelela, kwiinyanga ezimbini okanye ezintathu uza kuphawula umphumo wale nkathalo.
Ukusilalisa umsila. Ngoko, makhe sibone ukuba yintoni enokuyenza ngenxa yobuhle entanyeni yakho.
1. Zama ukuqhawula amahlombe akho, ulungele umqolo wakho, jonga isibhakabhaka esibhakabhaka, ngamafu emhlophe ekhephu okanye kwiinkwenkwezi - ngale ndlela, uya kuqeqesha umsila wesibeleko somlomo wesibeleko.
2. Nika ulala ebomini. Zama ukulala kwi-cushion okanye umcamelo omncinci, oku kuya kukunceda kwi-chin.
3. Ekuseni kwisitya kuba nethuba elihle lokuhlalisa intanyeni kunye neendawo ezinqabileyo. Iinqwelo zamanzi apholileyo kwindlela ephuma kwi-bottom up yinkqubo enhle kwaye imnandi. Kwaye akuthathi ixesha elide. Emva kokuhlamba, sebenzisa ukhilimu ophuculisayo kwesikhumba, esetyenziswe ukusuka phezulu. Inkqubo efanayo iya kwenziwa ngokuhlwa xa uhlamba okanye uhlambe. Emva kokusebenzisa ukhilimu, sithatha lula intamo nentsimbi. Emva kokuhlamba, ubuso obusemva entanyeni buhlanjululwe ngethawula, kodwa phambili, intamo yomsi iphosiwe kakuhle okanye ivumeleke ukuba yome.
4. Kakade ke, iimaski ezahlukahlukeneyo kunye neekram ziza kuba yindlela efanelekileyo yokunyamekela ulusu entanyeni kunye ne-décolleté.
Ndifuna ukuthetha ngale ndlela elula kwaye ifumaneka ngayo yokusilalisa, kokubili ubuso kunye nentamo. Oku kuhlambuluka kwimihla ngemihla ngeqabunga leqhwa. Isiphumo sitholakala kwi-drop down sharp, eyiluncedo kakhulu kwimpilo. Ukuqhuba inkqubo enjalo, udinga i-jug yamanzi ashushu kunye neqhwa elincinci, kunye ne-til towel. Ithawula kufuneka ifakwe emanzini atshisayo, iqhutywe kwaye isetyenziswe ebusweni okanye entanyeni (imizuzu emihlanu ukuya kweyimi-10), uze usule iikhabhi ze-ice (ukuhamba kakuhle ngaphandle kokucindezela). Emva kweqhwa, saphinda sisebenzise ithawula elitshisayo, kodwa imizuzu emibini, uze uhlambulule isikhumba ngamanzi apholileyo kwaye usebenzise imaski okanye ukhilimu. Ulusu lwakho luya kuba lutsha emva kweenkqubo ezintathu kunye nemibimbi ziya kutshabalala.
I-Recipe ye-mask kwi-mandarin
Ikhumba elomileyo lobuso: amayeza asekhaya
Indlela yokubuyisela ulusu emva kweeholide
Iimaski zokujongana neoli yeoli
Ubuhlungu phantsi kwe-scapula eyiyo: uhlobo, izizathu, ukuxilongwa
Ingaphakathi kwigumbi lokulala intombazana
Ikhekhe "I-Cottage yaseMonastic"
Ukutya kwesiFrentshi ukulahleka kwesisindo
Ama-bhisikidi anebhokisi yebhanki kunye nobusi
Ukufakelwa kweenwele kwi-eyelashes
Tartlet "Unyaka Omtsha"
Yintoni enokuyenza, ngoko kwakungalunganga emva kokusela utywala
Ndifuna ukuba nomntwana, kodwa andinako